Zinedine Zidane Oo Shil Ku Galay Magaalada Madrid Iyo Sheeko Layaab Leh Oo Ka Dhalatay | Laacib.net
Zinedine Zidane Oo Shil Ku Galay Magaalada Madrid Iyo Sheeko Layaab Leh Oo Ka Dhalatay
February 13, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Zinedine Zidane Oo Shil Ku Galay Magaalada Madrid Iyo Sheeko Layaab Leh Oo Ka Dhalatay
Tababaraha kooxda kubadda ccagta Real Madrid ayaa shil baabuur ku galay magaalada Madrid xilli uu ku socday xarunta tababarka kooxdiisa ee Valdebebas maalintii Sabtidiii ee toddobaadkan.
Zinedine Zidane ayaa gacantiisa ku watay baabuurka uu ku tegayey Valdebebas, waxaana xilli uu jid weyn oo magaalada dhex mara socday uu si lama filaan ah xagga dambe ugaga dhacay baabuur kale oo ka horreeyey, waxaana halkaas ka dhashay khasaare aan buurnayn.
Ignacio Fernandes oo watay baabuurka kale ee uu Zidane dhinaca dambe kaga dhacay, ayaa sidii wax u dhaceen uga sheekeeyey wariye La Voz de Galicia oo ka tirsan wargeyska Marca, waxaanu bannaanka keenay khasaarihii dhacay iyo sidi ay isku qaabileen macallinka Real Madrid.
“Isla markii aan arkayba, waan aqoonsaday, waxaanan u idhi ‘waxaan jeclaan lahaa inaan kugula kulmo xaalad ka duwan tan, laakiin tan lafteedu ma xuma.” Ayuu Ignacio u sheegay La Voz de Galicia.
Labada gaadhi ayaa la sheegay in garaafooyin soo gaadheen, laakiin sida ay warbaahintu qoreen, Zidane ayaa usoo kaxeeyey ninka uu gaadhiga ka jiidhay garoonka tababarka ee Valdebebas, halkaas oo ugu dambayntii uu kala xidhiidhsiiyey shirkadda caymiska ee bixinaysa khasaaraha uu geystay gaadhigiisu.
Ignacio Fernandes waxa uu weydiistay Zidane inuu la galo sawir ka hor intii aanay kala tegin, waxaanu tababaraha Real Madrid ku qaabilay qalbi-furnaan, iyadoo muuqaalkooduna uu kusoo baxay wargeysyada dalka Spain qaarkood.
“Waxa aanu ku tidhi aynu sawir wada galno, sababtoo ah dadka kale ima aamini lahayn haddii aan ku idhaahdo Zidane ayaa gaadhigayga jiidhay. Si dabacsan ayuu iiga ogolaaday, waxaanu iska qaaday koofiyaddii madaxa ugu jirtay, sawir ayaananu wada galnay.” Ayuu yidhi Ignacio.
Xili dambe, waxa Ignacio uu telefoon ka helay wakiilka Zinedine Zidane oo uga mahad celiiyey sidii dabacsanayd ee uu waqtiga ula qaatay, laakiin waxa uu u sheegay inuu ka xun yahay in aanu ku mada-daalinin garoonka tababarka oo aanu siinin funaanadaha ciyaartoyga oo la saxeexay ama tigidh uu ciyaaraha ku daawado.